Sunday, October 3, 2021 by Jọshụa James
Sọnde, Ọktoba 10, 2021 10:39 nke ụtụtụ
Sọnde, Disemba 5, 2021 12:35 nke ụtụtụ
M gbasoro ntuziaka ahụ, na debian 11 m "na-ahụ" ebe nchekwa mana ọ bụghị nkwalite kernel
Ana m agba Linux 5.10.0-9-686 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686
Ewepụrụ usoro i686 na nkwalite ahụ? Ma ọ bụ, enwere mgbanwe ọzọ a ga-eme?
Wenezde, Disemba 8, 2021 6:09 nke ụtụtụ
Ndewo Steve, daalụ maka ozi ahụ.
Ekwetaghị m na ọtụtụ n'ime Kernels ndị a na-akwado i686 ma. Ọzọkwa, anyị nọ ugbu a na Linux Kernel 5.15 site na ndekọ na-akwụghị ụgwọ.
Dị ka o kwesịrị, ị nwere ike ịwụnye Linux Kernel 5.14 site na XanMod ma ọ bụ Liquor Kernell mana nke mbụ, lelee ma ha na-akwado i686.
Achọpụtabeghị ya, mana izu ole na ole gara aga, ha abụọ nyere 5.14 na 5.15, mana ọtụtụ n'ime alaka ndị a na-amanye kernels ọhụrụ.
https://www.linuxcapable.com/how-to-install-linux-kernel-5-15-on-debian-11-bullseye/ <- Linux Kernel 5.15 sitere na Otu Debian https://www.linuxcapable.com/how-to-install-liquorix-linux-kernel-on-debian-11-bullseye/ <--- Ka nwere 5.14 https://www.linuxcapable.com/how-to-install-xanmod-linux-kernel-on-debian-11-bullseye/ <--- Stable ka nwere 5.14 Daalụ.